Ny Torolàlana #Hashtag | Martech Zone
Ny Torolàlana #Hashtag
Zoma, Aprily 5, 2013 Alakamisy, Septambra 4, 2014 Douglas Karr
Nanoratra momba ny maha-zava-dehibe ny fampiasana izahay tenifototra rehefa mampiasa Twitter ianao, saingy fomba fiasa izay miparitaka amin'ny alàlan'ny sehatra hafa koa. Ny tena mampiavaka azy dia nanampy fanampiana ny Youtube, Instagram ary Google+… miaraka amin'ny Facebook eo ho eo! Raha tsorina, ny tenifototra dia fomba tsotra ilazana teny, fehezanteny na lohahevitra lehibe ao anatin'ny lahatsoratranao.
Manontany tena ve ianao hoe iza no nampiasa ny tenifototra voalohany? Afaka misaotra an'i Chris Messina ianao tamin'ny 2007 tao amin'ny Twitter!
ahoana ny fahitanao ny fampiasana # (pounds) ho an'ny vondrona. Toy ny amin'ny #barcamp [DIEM]?
- Chris Messina ™ (@chrismessina) Aogositra 23, 2007
Amin'ny alalàn'ny soratrao amin'ny alàlan'ny famantarana pound, dia manamora ny fitadiavana sy ny fitadiavana ny atiny ianao. Ho an'ny mpivarotra dia paikady ilaina izany - matihanina maro no mikaroka ireo tranokala ireo amin'ny fikarohana olona, ​​orinasa, vokatra na serivisy izay amidinao! Misy koa ny mahafinaritra fitaovana any ivelany hanaovana fikarohana hashtag!
Tags: chris messinatenifototra facebooktenifototra voalohanygoogle plus tenifototrahashtagfikarohana hashtagtenifototraTwittertenifototra twittertenifototra youtube
Qvidian: Inona ny boky Playbook?
Fiarovana amin'ny mailaka sy ny fampiasana manerantany
Apr 19, 2013 amin'ny 2: 50 AM
Heveriko fa nampiasa ny sary famantarana ICQ ho an'ny fidirana IRC ianao. Tsy azoko antoka fa fanahy iniana io fa nampisavoritaka ahy kely tamin'ny voalohany. Ankoatr'izay dia tsara ny mamaky. Farafaharatsiny farafaharatsiny…. 😉 Misaotra nizara ihany Douglas!